Shakigii laga qabay in Daahir Geelle uu u shaqeeyo Fahad Yasin oo soo ifbaxay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaShakigii laga qabay in Daahir Geelle uu u shaqeeyo Fahad Yasin oo...
Shakigii laga qabay in Daahir Geelle uu u shaqeeyo Fahad Yasin oo soo ifbaxay
Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo ka mida Midowga Musharixiinta, ahna afhayeenkooda ayaa soo jeediyey in lasii wado wadahadlaka Midowga iyo Ra’iisal wasaaraha xilgaarsiinta kaddib markii uu shirkaas fashiliyay Fahad Yasin oo adeegsanaya Cabdiraxman Dheere sida aay goobjoogayaal u sheegeen MOL.
Musharaxan oo ka maqnaa shirkii ugu danbeeyay ee fashilmay, markii uu dibadda u safray ayaa soo diray farriin uu ku yiri: “Annaga oo ka duuleyna mabda’eenna ah in arrinta Soomaaliya ay tahay miis ku dhamaato oo aan fagaara kale lagu xallin karin, waxaan soo jeedinaynaa in ay sii socdaan wadahadalladi Ra’iisal wasaare Mohamed Hussein Roble iyo Midowga Murashaxiinta, si arrimaha murugsan ee Soomaaliya xal waara looga gaaro”.
Farriinta ayaa la rumeysan yahay in uu u soo dhiibay Fahad Yasin oo in dhaweydba lagu xamanaayay in uu jiro xiriir hoose oo u dhexeeya Dahir Geelle & Fahad Yasin, tuhunka ayaa sii batay kaddib dhacdadii 19 Febraayo markii la weeraray hotelka Maa’ida ee aay degenaayeen Xasan Sheekh & Sheekh Sharif taasoo markii danbe uu Daahir Geelle kala hadlay Fahad Yasin in uu kala diro ciidankii ku hareereysnaa Hotelka si looga bixiyo labadii Madaxweyne ee hore.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo Midowga Musharixiinta ay go’aan wadajir ah ku sheegeen in wahadalada ay u burbureen, kadib markii Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu awoodi waayey inuu go’aan qaato.
Muddooyinkii danbe waxaa shirarka Midowga Musharixiinta laga waayey xubno dhowr ah oo ka baxsan siyaasiyiinta saameynta leh ee Muqdisho kasoo jeeda.